Eyona KaiBiLi i-COVID-19 ye-Neutralization Antibody Manufactory kunye neFactory |Genesis
IsiXhobo soVavanyo oluKhawulezayo lwe-COVID-19 lwe-antibody (igazi elipheleleyo/iSerum/iPlasma) luvavanyo lomgangatho wokuhamba kwe-immunochromatographic ukuze kufunyanwe i-antibody engathathi hlangothi ukuya ku-2019-nCoV egazini liphela, kwiserum okanye kwiplasma.
IKaiBiLiTMI-COVID-19 iNeutralization Antibody Rapid Test Isixhobo yi-lateral flow chromatographic immunoassay ukuze kufunyanwe umgangatho wokungathathi hlangothi kwe-antibody ukuya ku-2019-Novel Coronavirus egazini lomntu lonke, i-serum okanye i-plasma specimen.Isetyenziswa kuphela njengesalathisi esichongayo kwisiphumo sesitofu sokugonya.Ayifanelekanga ukujongwa kwabantu ngokubanzi.Inoveli coronaviruses yeyodidi lwe-β.
I-COVID-19 sisifo esosulelayo esinamandla sokuphefumla.I-2019-nCOV ineeproteni ezininzi zesakhiwo kubandakanya i-spike (S), imvulophu (E), i-membrane (M) kunye ne-nucleocapsid (N).Iprotheni ye-spike (S) iqulethe i-domain binding domain (RBD), ejongene nokuqaphela i-cell surface receptor, i-angiotensin eguqula i-enzyme-2 (ACE2).Kufunyaniswe ukuba i-RBD ye-2019-nCOV S protein inxibelelana ngamandla ne-ACE2 receptor ekhokelela kwi-endocytosis kwiiseli zemiphunga enzulu kunye nokuphindaphinda kwentsholongwane.Ukosulelwa yi-2019-nCOV iqala ukusabela komzimba, okubandakanya ukuveliswa kwee-antibodies egazini.Ama-antibodies afihliweyo anikezela ukhuseleko kwizifo ezizayo ezivela kwiintsholongwane, kuba zihlala kwiinkqubo zokujikeleza kwegazi kwiinyanga ukuya kwiminyaka emva kokusuleleka kwaye ziya kubopha ngokukhawuleza kwaye ngamandla kwi-pathogen ukuvala ukungena kwamaselula kunye nokuphindaphinda.Ezi zithinteli zibizwa ngokuba zii-neutralization antibodies.
Ukufunyaniswa kwe-antibody yokungathathi hlangothi ukuya ku-2019-iNoveli yeCoronavirus kwigazi elipheleleyo lomntu, i-serum okanye isampuli yeplasma.
Igazi elipheleleyo, iSerum okanye umzekelo wePlasma.
Isixhobo sovavanyo lwe-COVID-19 sokungathathi hlangothi
I-Capillary dropper yegazi elipheleleyo
※ I-Lancet yoKhuseleko yasimahla kunye nephedi yotywala
KaiBiLiTMI-COVID-19 ye-Neutralization Antibody
Ngaphambili: I-KaiBiLi eyandisiweyo ye-ViralTrans Saline
Okulandelayo: KaiBiLi Flu A&B Antigen